🥇 Chirongwa chekutengesa zvinhu
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 68
Chirongwa chekutengesa zvinhu
Vhidhiyo yechirongwa yekutengesa zvinhu
Raira chirongwa chekutengesa zvinhu
Kutengesa muchitoro - yakasarudzika mhando yechiitiko inosanganisirwa nekutengeswa kwezvinhu chaizvo zvakasarudzika - zvidimbu zvemidziyo (kazhinji zvipfeko, zvisingawanzo - shangu, zvishongedzo, nezvimwewo), zvakasara muchitoro. Accounting kazhinji inosanganisira kuchengeta ese marudzi emarekodhi ane hombe mugove we stock marekodhi uye kutengesa. Nzira yakatendeseka uye yakapusa yekuita kuti chirongwa chechitoro chishande zvizere chirongwa chekutengesa zvinhu. Chirongwa chega chega chekutengesa zvinhu chakagadzirirwa kuronga basa rekambani yekutengesa, kumhanyisa maitiro ekugadziriswa kwedata uye systematization, uye kugadzirisa kuenderera kwebasa (kunyanya iro basa rebazi rekutengesa). Vamwe mamaneja, vachifunga kuti vawana nzira isingadhuri yekutenga chirongwa chekutengesa zvinhu, vanosarudza kurodha pasi chirongwa chekutengesa zvinhu online nekubvunza chirongwa chekutsvaga saiti yekutsvaga kuti utengese zvinhu mahara kana zvirongwa zvekutengesa zvinhu mahara kurodha pasi. Izvo zvinofanirwa kutsanangurwa kuti nzira iyi kuchinetso haina kukwana zvachose uye haigone chete kudzikisira kuvimba kwako muzvirongwa zve accounting, asiwo zvinotungamira mukurasikirwa neruzivo. Icho chokwadi ndechekuti havazi vese programmer vanozotarisira kuchengetedzwa kwechirongwa chemahara chekutengesa kudzora kutengeswa kwezvinhu (uye kana zvirizvo, kwete pasina kukurudzira kwakadai semari), uye ichi chishuwo cherutsigiro rwehunyanzvi munguva pfupi inotevera kuoneka. Mune mamwe mazwi, vese nyanzvi vanokurudzira chete chirongwa chekutenga chakatengwa kubva kune vakavimbika vanogadzira.
Chirongwa chakavimbika kwazvo chekutengesa zvinhu uye chekuchengetedza - iyo USU-Nyoro. Ichi chirongwa chekutengesa zvinhu chine zvakawanda zvakanakira kupfuura ayo akafanana uye anokwanisa kuratidza mhedzisiro yakanaka kwazvo nekukurumidza. Iyo inoratidzirwa nemhando yepamusoro yekuuraya, nyore kushandisa, inonakidza bhajeti mutengo uye chirongwa chakaringana chekuchengetedza. Vagadziri veUSU-Soft vane mucherechedzo wepasi rose wekuvimba DUNS, iyo inosimbisa kuzivikanwa kwechirongwa ichi chekutengesa chemaneja pasi rese seimwe yezvinhu zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvekutengesa zvinhu. Iyo yekutengesa chirongwa chekugadzirisa zvinhu icho chinokubatsira iwe kugonesa kutengesa kwezvinhu zvinokutendera kuti usashandise kwete chete zvakajairika zvishandiso muchitoro (chitoro uye yekuchengetera michina - barcode scanner, maresipi maprinta, zvinyorwa, nezvimwewo), asi chishandiso chitsva chose, izvo zvisiri zvitoro zvese zvine ruzivo parizvino - emazuva ano data rekuunganidza zviteshi (DCT). Ichi chinhu chidiki diki, icho mushandi anongotakura muhomwe yake uye oshandisa pazvinenge zvichidikanwa. Muenzaniso: kuitisa hesera, iwe unoshandisa uye chengetedza yakawanda nguva. Iyo data inoverengwa kunze uye vozoendeswa kune hombe dhatabhesi. Iyo chishandiso inokwanisa kuchengetedza imwe huwandu hwe data, inova yakakosha yekuwedzera. Nekudaro, kunyangwe paine zvinhu zvakawandisa mumatura, unogona kuzviwedzera zvese mudhatabhesi uye iyo yekuchengetera iyo yekutengesa system yekuverenga haina muganho.
Shanda nevatengi zvakare inofanirwa kutariswa kwakasarudzika. Ruzivo nezvevatengi runogona kupinda zvakananga padhesiki remari. Semuenzaniso, iwe unopinda mune ye accounting system yekutengesa uye yekuraira manejimendi zita, zita rezita, zita rekuremekedza remutengi, pamwe nekuti ane makore mangani, kana achishuvira, zvaanofarira kana zvichingodaro. Mutengi wega wega anopiwa mabhonasi pakutenga kwega kwega. Isu tinofunga kuti hapana chikonzero chekutsanangura iri bhonasi system, nekuti zvitoro zvese zvakagara zvichishandisa zano iri rekukwezva nekuchengetedza vatengi. Vashoma vanhu vanogona kuramba mukana wekushandisa aya akaunganidzwa mabhonasi pachinzvimbo chemari uye kutenga zvimwe zvinhu muchitoro chako. Iwe uchaona izvo zvinotenga izvo mutengi anotenga uye anogamuchira mabhonasi. Nekudaro, iwe unonzwisisa izvo zvaanosarudza uye nekudaro iwe unotumira kushambadzira uye unopa kutenga chimwe chinhu, uchimukurudzira iye kushandisa zvakatowanda. Vatengi vanogona zvakare kupatsanurwa muzvikamu kuita kuti zvive nyore kufamba kuburikidza nedhatabhesi hombe iro rine ruzivo nezve nhamba huru yevatengi. Iwo manejimendi evatengi ndizvo zvinodiwa mune chero bhizinesi sangano.
Kupatsanurwa uku kunogona kuve kwakanangana nenzira dzakasiyana: zvichibva pahuwandu hwevashanyi (pane vakajairwa uye vashoma vatengi); zvichibva pakuvapo kana kusavapo kwekunyunyuta (pane avo vasingambonyunyuti uye nevaya vanozviita nguva dzese); zvichibva pane zvimwe zvakatengwa, pazera, munzira yekugara, nezvimwe. Vamwe vatengi vanotokodzera kupihwa chinzvimbo cheVIP uye neropafadzo dzese dzavanoda kupihwa. Uye kuti ugare uchikurukura nevatengi vako, unogona kushandisa nzira ina dzekutaurirana - Viber, SMS, e-mail uye kunyangwe kufona kwezwi. Unogona kutumira kushambadza, makatalogu, zvipo zvakakosha, mitengo, kana kukoka kuzviitiko, kukorokotedza pazororo, kutenda nekutenga, kuzivisa nezvevatsva vezvinhu nezvimwe zvakawanda.
Iwe unoda kudzivirira zvikanganiso kana uchishanda nezvigadzirwa uye kutengesa? Iwe unoda kuchinjisa rimwe rebasa risinganetsi kuenda kumushini unogona kuribata zviri nani uye nekukurumidza? Iwe unoda kukwidziridza rako bhizinesi zvakanyanya zvekuti vakwikwidzi vako vazove kumashure kumashure? Wobva unzwa wakasununguka kusarudza yedu yekutengesa chirongwa chekutonga uye otomatiki. Isu tinovimbisa izvi zvese, uye kunyangwe zvimwe. Isu tinoshandiswa kushamisika vatengi vedu. Pane yedu webhusaiti yepamutemo iwe unowana rese ruzivo iwe rwaunoda, uyezve kukwanisa kurodha yemahara demo vhezheni yekuisa iyo kune yako kambani uye wotarisa kana zvese zvatinokuudza ichokwadi kana kwete. Tinogona kukuvimbisa kuti yedu yakasarudzika sisitimu yekushandisa uye bhizimusi remazuva ano harizokuodza moyo uye iwe zvechokwadi uchazoda kuramba uchishandisa iro! Taura nesu nenzira ipi neipi yaunoda. Isu tinogara tichikurukura uye tichafara kupindura chero mibvunzo yaungave unayo.
Accounting yekutengesa kwezvinhu
Accounting yekutengeswa kwezvinhu
Kuita accounting kuchitoro
Accounting yezvinhu uye masevhisi
Accounting yezvinhu mumatanda
Accounting yezvinhu muchitoro
Kuverengera kwezvinhu mukutengesa
Zvigadzirwa accounting chirongwa
Maitiro ekuchengeta zvinyorwa zvezvinhu?
Chigadzirwa accounting chirongwa
Chigadzirwa chekutengesa accounting
Chirongwa chekubika muzvitoro
Chirongwa chechitoro chinotengesa
Retail chitoro chinoshanda
Software yeiyo yekutengeserana
Trade accounting chirongwa
Chirongwa chekutonga kwevatengesi